Olole Nadaafadeed oo xilliyada habeenkii ah ka socota waddooyinka caasimadda – Radio Muqdisho
Agaasime Ku-xigeenka Waaxda nadaafadda ee gobalka Banaadir Mudane Xuseen Abtidoon Warsame ayaa faahfaahin ka bixiyey ololaha nadaafadeed ka socda caasimadda.
Agaasime ku-xigeenka oo la hadlay Radio Muqdisho ayaa sheegay in maamulka gobolka uu ku howlanyahay sidii uu dib ugu soo celin lahaa bilicdii ay caasimaddu lahayd, waxaana uu intaa ku daray in la joogteyn doono sidii loo xoojin lahaa ololaha nadaafadda gobolka.
“Ololaha Nadaafadda si xowli ah ayay ku socdaan, waxaa jirto oo kale in xilliyada habeenkii la nadiifoyo waddooyinka waa weyn ee caasimadda, sida tan Maka Al-mukarama, waana tallaabo aad u muhiimsan in shaqaalaha Nadaafadda dowladda Hoose ee Xamar ay markale u istaagaan in habeen iyo maalin la nadiifiyo bilicda Muqdisho” ayuu yiri Mudane Xuseen Abtidoon.
Agaasime Ku-xigeenka Waaxda nadaafadda ee gobalka Banaadir ayaa sheegay inay jiraan shaqsiyaad wadada qashinka ku soo daadinaya, kuwaasi oo u jeediyay digniin ku aadan inaysan waddada qashinka ku soo shubin.
Mudane Xuseen Abtidoon Warsame ayaa ugu dambeyntii xusay in maamulka gobolka uu ku howlanyahay sidii dib loo furi lahaa dhuumaha ay biyaha maraan, maadaama xilli roobaad la guda geli rabo, si waddooyinka Muqdisho aysan u noqon meelo ay biyo fadhiistaan.